Maraykanka Oo Jawaab Ka Bixiyay Eedaymo Ay Haayada Sirdoonka Somaliya Ee Nissa u Soo Jeedisay Wariye Haaruun Macruuf | Marsa News
Maraykanka Oo Jawaab Ka Bixiyay Eedaymo Ay Haayada Sirdoonka Somaliya Ee Nissa u Soo Jeedisay Wariye Haaruun Macruuf
Hargeisa:(Marsanews) Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barta twitter-ka uga hadashay eedeynta ay hay’adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA u jeedisay weriye Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta Af-Soomaaliga idaacada VOA ee ay leedahay dowladda Mareykanka.
Qoraalkan kooban ee ay safaaraddu soo dhigtay twitter-ka ayaa lagu sheegay in “weerarada NISA ee ka dhanka ah Haaruun Macruuf” ay halis galinayaan xoriyadda hadalka iyo madax-banaanida warbaahinta.
“Haaruun Macruuf waa weriye leh ixtiraam oo xirfadle ah kana howl-gala VOA, waana mid ka mid ah suxufiyiinta ugu saameynta badan Soomaalida. Sidaa daraadeed Weerarada NISA waxay halis gelinayaan xoriyadda hadalka iyo madax-banaanida warbaahinta ee aas-aaska u ah dimqoraadiyadda iyo isla xisaabtanka dowladeed ee Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka ay safaaradu soo dhigtay barta twitter-ka. oo u dhignaa sidan
Hay’add Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa qoraal ay soo saartay 2-dii bishan April ku sheegtay, inay tallaabada ku habboon ee sharciga ah ka qaadeyso, weriye Haaruun Macruuf.
Qoraalkaas oo ay soo dhigtay barta twitter-ka ayay NISA ku sheegtay in Haaruun Macruuf uu leeyahay xidhiidho khatar ku ah amniga qaranka, kuna kacay falal ka baxsan anshaxa warbaahinta,” sida lagu sheegay qoraalka.
Qoraalka Nissa ayaan intaa ku sii daray “Waxaanu hay’adaha dalka la wadaagaynaa iney ka feejignaadaan xidhiidhkiisa, wariye haaruun macruuf, soona wargaliyaan laamaha amniga qaranka.